त्रिशला र रोहितको ‘काठमान्डु सहर’टुबोर्ग ओपन सेसन्स् २ मा Bizshala -
त्रिशला र रोहितको ‘काठमान्डु सहर’टुबोर्ग ओपन सेसन्स् २ मा
काठमाण्डौ । टुबोर्ग ओपन सेसन्स् २ को मञ्चमा त्रिशला गुरुङले रोहित शाक्यको साथमा उनीहरुको हिट गीत‘काठमान्डु सहर’को प्रत्यक्ष प्रस्तुति पेश गरेका छन् ।
उनीहरुको उक्त हिट गीतलाई रोहितको नयाँ भाव दिई प्रस्तुत गरिएको छ । च्यानल आरबिट्ररीद्वारा सञ्चालन हुने टुबोर्ग ओपन सेसन्स् २०१८ मा सुरु भएको एक युट्युब सिरिज हो । पहिलो संस्करणमा अपलोड गरिएको ५१ वटा गीतहरु मार्पmत सफलतापुर्वक १ करोड भन्दा बढी भ्युज संकलन गरेपछि अहिले फेरि दोस्रो संस्करण सुरु भएको छ ।
राजधानी सहरबाट प्रेरित उक्त गीतले त्रिशलाको नजरबाट काठमान्डुको सुन्दरता, मानिस र यादहरुको कथा बताउँछ । गीतले त्रिशलाको सुरिलो आवाज र रोहितको सांगीतिक जादुलाई एकसाथ प्रस्तुत गर्दछ । सानैदेखि संगीतमा निकै रुचि राख्ने त्रिशला प्रशंसित गायिका हुन् भने अहिलेको नेपाली सांगीतिक बजारमा निकै प्रतिष्ठित र छुटाउन नमिल्ने नाम हो रोहितशाक्य । शाक्य निकै लोकप्रिय प्रोग्रेसिभ–अल्टरनेटिभ रक ब्याण्ड ‘जिन्दाबाद’का सदस्य पनि हुन् । हालको नेपाली सांगीतिक बजारमा उनी एक सफल युवाप्रतिभा रहेका छन् । टुबोर्ग ओपन सेसन्स्को यस सिजनका निर्माताहरु मध्ये रोहित पनि एक हुन् ।
टुबोर्गको संगीत सँगालोमा र गर्व हुने सम्पदा रहेको छ जसले, नयाँ शैली र कलाकारहरुलाई नयाँबजारमा चिनाउन मदत गरेको छ । पुराना साथै नयाँ कलाकारहरुलाई आफ्नो संगीत विश्वव्यापी रुपमै धेरै दर्शकहरुमाझ पु¥याउने मञ्चको निर्माण गर्न टुबोर्ग सफल भएको छ ।
काठमाण्डौ । विश्वव्याधी कोभिड–१९ का कारण नेपाल पनि पछिल्लो पटक...
कामना सेवा बैंक र डा. सन्चो क्लिनिकबीच ‘स्वास्थ्य परामर्श’
काठमाण्डौ। कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड र डा. सन्चो क्लिनिक...
काठमाण्डौ । नेपाल रेमिट इन्टर्नेशनल प्रा.लि.ले नेशनल पेमेन्ट्स...